Rehefa-varotra Service - Dongguan Yuechuang automatique Co., Ltd
Ny raharaham-barotra filozofia ny YueChuang: tsy fivadihana sy ny takarina, matihanina sy mahomby, ary handresy-fandresena fiaraha-miasa , mba hanome mpanjifa amin'ny matihanina sy mahomby rehefa avy-varotra fanompoana, isika manao ny fotoam-manaraka fampanantenana ho an'ny mpanjifa:
1. milina sy ny fitaovana rehetra nivarotra noho ny orinasa, manomboka amin'ny vaninandro fanekena ny fanekena, fitaovana maimaim-poana fiantohana amin'ny ankapobeny ho an'ny taona iray (afa-tsy ho an'ny olona-nanao fahavoazana), avy amin'ny fitaovana tatitra fanekena sonia, isan-karazany ny fahavoazana vokatry ny fampiasana ara-dalàna ny antoko B no tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana sy ny Replacement maimaim-poana, manao faritra araka ny fifanarahana misy eo amin'ny antoko, manome fanohanana ara-teknika matihanina ny fiainana.
2. VietNin ​​Hanome fampiofanana ho an'ny mpanjifa fitaovana mpandraharaha sy ny injeniera teknisiana ao amin'ny asa sy ny hetsika mahazatra maningana mandra-fangatahana azo sy Fanamboarana tsy miankina niasa.
3. Rehefa avy manokatra ny varotra HOTLINE 24 ora isan'andro, dia hamaly tsara sy manome torohevitra matihanina rehefa nahazo antso ny fanamboarana. Raha toa ka mila ho any amin'ny toerana ho an'ny fikarakarana, tonga teo amin'ilay toerana, araka ny fotoana voatondro.
4. Rehefa Tapitra ny fe-potoana fiantohana, ny orinasa dia hanome fikojakojana fanompoana sy ny fanohanana ara-teknika araka ny tena zava-misy, ary araka ny tokony handidy fitaovana, Accessories sy ny tolotra asa.
5. Manome fanohanana ara-teknika asa fanompoana mandritra ny fiainana.
Omeo mpanjifa amin'ny tanteraka fanohanana ara-teknika sy Ankehitriny-varotra fanompoana mba hanampiana ny mpanjifa hanafaka ny asa sy ny asa, hanatsotra famokarana rafitra, hanatsarana ny fahombiazana, Mampitombina vokatra tsara, hampitombo orinasa famokarana fahombiazana, mampihena ny ara-teknika takian'ny ny mifandray manokana, manatsara automatique fahombiazana, ary mamokatra azo antoka kokoa ary azo antoka kokoa ny vokatra. Automotive connectors, Toyota ny Auto-assembler ho an'ny fiara connectors no atokisana.